भायनेटले ल्यायो ‘छ क्या लभ्ली अफर’, के-के छन् सुबिधा ?	Postpati – News For All
भायनेटले ल्यायो ‘छ क्या लभ्ली अफर’, के-के छन् सुबिधा ?
पोष्टपाटी २०७६ मंसिर ११,बुधबार प्रकाशित पढ्न लाग्ने समय : १ मिनेट
मंसिर ९, काठमाडौं । नेपालको पहिलो र बिशाल FTTH (Fiber-to-the-home) इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर भायनेट कम्युनिकेसन्सले संचालनको २० औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा ग्राहकहरुको लागि ‘क्या लभ्ली अफर’ नामक आकर्षक योजना ल्याएको छ ।
यस योजना अन्तर्गत ग्राहकहरुले मात्र रु. ३४,००० मा एक वर्षका लागि इन्टरनेट, नेट टि.भी र ६४ मेगापिक्सल क्यामरा भएको XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO प्राप्त गर्नेछन् ।
त्यसैगरी रु. २७,७०० मा ग्राहकहरुले एक वर्षका लागि इन्टरनेट, नेट टि.भी र XIAOMI REDMI NOTE 8 प्राप्त गर्नेछन् । यसका साथै भायनेट इन्टरनेट प्याकेजसँग ग्राहकहरुले रु. १८,७९० देखि Samsung र Skyworth को ३२” देखि ४३” सम्मका LED TV हरुका साथै इन्टरनेट र फ्रि नेट टि.भी. प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । यस योजना अन्तर्गत भायनेटले ग्राहकहरुलाई ३ महिनाको लागि पनि विभिन्न आकर्षक प्याकेजहरु उपलब्ध गराएको छ ।
सन् १९९९ मा स्थापित भायनेट कम्युनिकेसन्स्ले भरपर्दो र राम्रो मूल्यमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सर्भिस प्रदान गर्दै आएको छ । सन् २०११ देखि भायनेट कम्युनिकेसन्स्ले फाइबर अप्टिक्स् इन्टरनेट वा FTTH इन्टरनेट सर्भिस शुरुवात गरेको थियो । भायनेट घरहरु र अफिसहरुलाई FTTH सेवाले जोड्न सफल भएको छ ।
आफ्नो सेवालाई काठमाडौं बाहिर विस्तार गर्दै भायनेटले हाल बनेपा, बुटवल, बिराटनगर, विरगंज, चितवन, हेटौंडा र पोखरामा समेत आफ्नो सेवा सुचारु गर्दै आएको छ ।
‘क्या लभ्ली अफर’
टेलिकमको ‘आफन्तलाई उपहार, सम्बन्ध सदाबहार’ गिफ्ट प्याकेज
टेलिकमले सागका खेलाडीहरुलाई ४५ सय निःशुल्क फोरजी सिमकार्ड दिने
एनटीसीको ‘प्रेमिल अफर’– १२ रुपैयाँ रातभर जतिपनि फोन गर्न पाइने
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्दा नेपाल टेलिकमको सिम निःशुल्क पाइने